Icala elisha le-aluminium yemoto yamandla amasha - IXuzhou Hanyu Aluminium Industry Co, Ltd.
Icala le-aluminium yemoto yamandla entsha
1. Igobolondo le-aluminium yebhethri elisha lezimoto elinamandla amakhulu aphezulu, imodulus ethile, ukuqina kokuqina, amandla okukhathala nokuqina kokuqina kokuqina. Ngoba i-aluminium alloy material ine-density low, non-magnetic, alloy is solid solid at a low low low, ukumelana okuphansi okuqondile kumandla kazibuthe, ukuqina komoya omuhle, kanye nokuqashelwa okusheshayo kwamandla we-radiation afakiwe.
2. Ukwelashwa okungaphezulu kwecala le-aluminium yebhethri ikakhulukazi kufafaza nge-electrostatic, futhi umbala wayo ucebile kakhulu. Imibala yayo imhlophe i-off-white, grey emnyama, imnyama, nohlaza okwezempi.
3. Icala le-aluminium yebhethri linezinzuzo ze-aluminium alloy, ngakho-ke likhanya futhi lihlala isikhathi eside lapho libunjiwe.
4. Icala le-aluminium yebhethri lingaphezu kwamapulasitiki, futhi ukukhiqizwa kwalo kungcono kunamanye amaphrofayili, futhi futhi kunokubukeka okuhle, ngakho-ke kunezinzuzo ezinhle zokukhiqiza.
5. Icala le-aluminium yebhethri lizocutshungulwa izinqubo ezishisayo nezibandayo. Icala le-aluminium yebhethri elenziwa ngale ndlela liyoba nokuqina okuqinile kokugqwala. Ngenxa yalokho, ibhethri le-aluminium yebhethri livikela kakhulu.
6. Leli gobolondo le-aluminium libuye libe nokuma okuhle, okungenziwa kulokukhanya okungaxutshwe nezinto eziningi zensimbi, futhi okubonakalayo kukhanya. Izici zalo zamakhemikhali zizinzile, azinamandla kazibuthe, zingaphinda zisetshenziswe kabusha futhi ziphinde zisetshenziswe futhi, futhi ziyinsimbi yensimbi ebekekayo futhi enokuphinda isebenze. Ubuncane obuncane, ukuthungwa okukhanyayo, umdlalo omuhle kakhulu wezimoto ezintsha zamandla.